Welcome to Ningbo J & S Botanics Inc., sida la aasaasay sanadkii 1996, waxaan ku ahaa qeybiyaha ah ee hormuudka ka ah Herb Qeybaha, Bee Products iyo Cuntada dheeriga ah Cuntada ee Shiinaha, waxyaabaha inta badan ay ansixiyaan Kosher iyo ECOCERT shahaadada organic. J & S Botanics waxaa lagu qiimeeyay sida Ningbo Beeraha Leading Enterprise tan iyo 2009.
J & S Botanics waxa uu ku yaalaa degmada Beilun, magaalada Ningbo, waxaa aad u sahlan, waayo, badda iyo gaadiidka dhulka labadaba. Our warshad iyo R & D Center dabooli 2,400 acres la maal ah oo dhan $ 4.5 million.The rakibidda qalabka iyo socodka geedi socodka waxaa si adag gacanta ku sida ay caadiga ah GMP. Our saarka sannadlaha ah ee laga soosaaray geed yar yahay ilaa 1000MT, daboolaa 100 alaabooyinka, waxaan si xoog leh ku jira cilmi waxyaabaha cusub.
Si loo xaqiijiyo in ayna ah soo saarta farsamooyinka iyo dayactirka hawl dabiiciga ah ee wax soo saarka our, J & S Botanics shaqeeya Doctor PARIDE ka Italy, oo hogaaminaya cilmi koox ku hawlanaa xariirta farsamooyinka waqtiga oo dhan. Haddaba J & S Botanics ayaa iska leh in ka badan 7 shatiyada iyo dhowr farsamooyinka gaarka ah ee heerka dunida keentay. Kuwani farsamooyinka sare naga caawiyaan si ay u ilaaliyaan xasiloonida wax soo saarka, kor u qaadista heerka shaqada iyo hoos u dhigaan qiimaha, sidaas awgeed gaarsiiyaa faa'iidooyinka macaamiishayada.
Ku dhowaad alaabta oo dhan waa in loo dhoofiyo. Our suuqyada waaweyn waxaa ka mid ah wadamada Asia koonfur bari, ka-Middle East, Spain, Germany, France, Switzerland, Japan, Maraykanka, Australia, South Africa iyo meesha Taiwan. Rajaynaynaa in la dhiso iskaashi tern dheer idinla joogo, haddii aad rabto inaad waydiiso kasta, fadlan si xor ah u nala soo socodsii.